Sidee loo isbarbardhigaa laba dukumiintiyo Word ah - Gofumed
Had iyo jeer waxa ay inooga dhacdaa, in aan ka shaqeyno dukumiinti, markaa qof ayaa isbeddelaya adigoon eegin isbeddelka iyo isla markiiba ama ka dib waxaan sameyneynaa isbarbardhig labadaba.
In kastoo aad u dhif ah Waxaan ka qoraa mawduucyada barnaamijyada loogu talagalay dadka mecoodka ah, waxaan u qaataa fursaddan sababtoo ah shaqadani waxa ka mid ah Microsoft Word, oo waxay ka dhigtaa kun jajab. Laga soo bilaabo bilowgii waxaa la soo jeediyay in labada dokumentiyo loo gudbiyo version .docx haddii aanay ahayn, si loo fududeeyo isbarbardhigga qaab-dhismeedka XML ee taageeraya qaabka cusub.
Si aad u sameysatid habka aad u baahan tahay inaad tagto ikhtiyaarka Isbarbardhig, ee tabarka Dib u eegid. Guddi ayaa u muuqda inaad dooratid dukumiintiga asalka ah oo ah dukumiinti kama dambeys ah oo ku hadlaya qofka aan rajeyneyno in lagu calaamadeeynayo isbedelada la helay.
Waxaa sidoo kale jira ikhtiyaarka ah in la kordhiyo guddiga qaabeynta waxyaalaha aan fileyno in la barbar dhigo; waxaad dooran kartaa haddaad rabto inaad dib u eegto isbedelka qaabka, dhaqdhaqaaqa, isbedelka caasimadaha, isbeddelada miisaska, si kastaba ...
Waxa kale oo aad dooran kartaa haddii isbadelka lagu calaamadeeyey heerka astaamaha ama calaamadee ereyga oo dhan kadibna, haddii aan sugno isbeddelada ku qoran mid ka mid ah labada nuqul ama mid cusub.
Natiijadu waxay muujinaysaa isku mar, marka la eego doorashadii lagu calaamadiyey wareegga sare, dhinaca bidixda natiijada dib u eegista iyo midigta labada dokumentigood marka la barbardhigo. Eeg in ay ku calaamadeeyeen midabyo kala duwan wixii la bedelay, la tirtiray ama lagu daray; Natiijada kama dambaysta ah waxaa lagu keydiyaa dukumiinti cusub oo leh dib-u-eegis lagu muujiyo marka jiir loo raro ama sida wicitaanada ku jira guddiga saxda ah ee dukumeentiga.
Waxay u muuqataa aniga oo ka mid ah tayada ugu weyn ee Ereyga ah ee aan marnaba ka faa'iideysan karno.
Post Previous«Previous Sida loo gudbiyo faylasha Ipad ilaa PC
Post Next Sida loo Qabto Screen IpadNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Sidee loo barbardhigaa laba dukumiintiyo Word"
Sergio N Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka fekerayaa tayada sare ee erayga oo aan badanaa ka faa'iideysanno »
Si aad u guulaysato faallooyinkaaga, si hubaal ah, waxaan durbadiiba u isticmaaleynaa Xafiiska 2010 waana muhiimada aan isticmaalo marar badan. Waxaan u maleynayaa inay tahay daruuri nagu qasbi karta inaan raadino xalal.
Waalidiinta iyo Wadaagista Boostada